‘झ्याम्ली बाख्राको पाठो’ भेट्दा - म्यागेजिन - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
उत्तमबाबु श्रेष्ठ ९ कार्तिक
नेपालमा बच्चाहरुलाई देखेर भनिन्छ, हुने विरुवाको चिल्लो पात। तर कुनै बेला विश्वप्रसिद्घ हार्वड विश्वविद्यालयको प्राध्यापक रहेका शिव गौतम बालक हुँदा चलनचल्तीमा भनिने चिल्लो पातका थिएनन्।
शीर्षक सुन्दै अनौठो लाग्ने र कौतुहल जाग्ने ‘झयाम्ली बाख्राको पाठो’ निबन्ध संग्रहका निबन्धहरु पढ्दा पाठकले प्राचीन सभ्यतादेखि बेदसम्म, धर्मदेखि विज्ञानसम्म, तथ्यांकशास्त्रदेखि जीव विज्ञानसम्म विविध विषयहरुमा ज्ञान प्राप्त गर्छन्।
अमेरिकामा प्राध्यापन गरिरहेका प्राध्यापक शिव गौतमद्वारा लिखित निबन्ध संग्रहमा झ्याम्ली बाख्राको पाठो लगायतका २२ वटा निबन्धहरु समावेश छन्। ती निबन्धहरुमा लेखकले भूमिकामा लेखेजस्तै लेखकका कचकच, चकचक, छुकछुक प्रशस्त देख्न सकिन्छ। निबन्धभित्र अज्ञान, विज्ञान, अभिज्ञान, सामान्यज्ञान र मनोविज्ञानका खुराकहरु पाठकले भेट्छन्।
संग्रहको पहिले निबन्ध पाल्सी कुरामा सामान्य बोलिचालीमा अरुले नबुझुन भनेर शब्दलाई बंग्याएर बोलिने पाल्सी कुरासँग कम्प्यूटरको दुनियाँको क्रिप्टोग्राफी कसरी जोडिन्छ थाह पाउन सकिन्छ। आगोको खोजीमा लेखकले आगोलाई मानिसले अहिलेसम्म गरेको आविष्कार मध्येकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेका छन्। त्यसको पुष्टि गर्न उनले मोटरका इन्जिनदेखि रकेटसम्मले कसरी आगो निकाल्छ भनेर विभिन्न दृष्टान्त दिएका छन्।
उत्तानो ओदान, झ्याम्ली बाख्राको पाठो, सपना, पाल्सी कुरा, घोडामा लागेका समयका गोडा, रुमालमाथि बसेर अरुण नदी तर्ने कलाजस्ता निबन्धहरुमा उनका बाल स्मृति कसरी ठूलो भएपछि परिपक्व बन्दै गयो र ज्ञानको आयतन फैलियो भनेर बुझ्न सकिन्छ। बाल्यकालमा लेखककी आमाले चट्याङ पर्दा ओदानलाई उत्तानो बनाएर राखेको स्मृतिमाथि निकै घोत्लिएका छन्– ओदान शीर्षकमा। निबन्धमा सानैमा सुनेको इन्द्रले बज्र हानेर चट्याङ पर्ने अन्धविश्वासमा आधारित किंबदन्ती र विज्ञानले उजागार गरेका सत्यलाई पढ्न सकिन्छ। ‘ठूलो भएपछि व्यक्तिले सच्चाई बुझ्दै जान्छन् (आफूले जस्तै) तर बालकको डर हटाउन आमाहरुले यसरी नै नयाँ नयाँ किंबदन्ती (चाहे अन्धविश्वासमा आधारित किन नहुन) भनिरहुन्’, उनी लेख्छन्।
‘घोडामा लागेका समयका गोडा’ मा लेखकले अलेक्जेन्डरदेखि बुद्घले चढेको घोडाको नाम लिएका छन् तर आफूले चढेको घोडाको नाम भुलेका छन्। त्यसमा कुनै बेला लन्डन र न्यूयोर्कको सडकको प्रमुख सवारी साधन घोडाले त्यहाँको सडकमा लिदीको समस्या निम्त्याएको बयान छ। उनका बाल्य स्मृतिका तिथिमिति भूलिएका कुराहरु निबन्धमा सधैं अभाव खड्किन्छ। कम्तिमा पनि लेखकले त्यसलाई अनुमान गरेर राखिदिएको भए निबन्ध अझै यथार्थवादी हुनसक्थे।
लाग्छ, लेखकसँग शब्द र अक्षरहरुको अर्थ खोज्ने मनोवैज्ञानिक रोग सवार छ। दुःख र सुख निबन्धमा दुःख र सुख को अगाडिको दुले नराम्रो सुले राम्रो बुझाउँछ भने दुवै शब्दको पछिल्लो अक्षर ख को अर्थ के हुन्छ? संस्कृतको असुर शब्दसँग इरानी शब्द अहुरको साइनो होला? वा चलनचल्तिमा बोलिने असुरसँग इजिप्टको न्याय कि देवी माआतसँग के नाता होला? अंग्रेजी शब्दहरु rotation, round, repeat, repetition, rotunda, ring, ring, rhythm र उस्तै अर्थ (घुमाउने) दिने नेपाली शब्द रोटी, रोटेपिङ, रिंगाउने, रिंगटाको सम्बन्ध छ कि? सत्यको सत्यतामा ट्रि र ट्रुथको सम्बन्ध कसरी भयो होला? नेपालीको सत्यलाई अंग्रेजी भनिने भेरिटासको vir सँसँग संस्कृतको वीर पो जोडिएको छ कि? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरुसँग लेखकले जोरी खोजेका छन्।
नेपाली र संस्कृत शब्दहरुको उत्पत्ति र त्यसको अन्य भाषा, संस्कृतिसँगको साइनोलाई लेखकले प्रत्येक जसो निबन्धमा केलाएका छन्। शब्द र अक्षरहरु केलाइएको अर्को निबन्ध अजर, अमर, अ र म बीचका अक्षर निबन्ध संग्रहकै सबैभन्दा गहकिलो निबन्ध हो। डब्लु (W) भनेको डबल (UU) देखि पाणिनीका व्याकरणसम्मका व्याख्याहरु त्यसमा छ। नेपाली भाषाका अक्षरहरु उच्चारण गर्दा घाँटीबाट निस्किएर जिब्रो, दाँत हुँदै कसरी क्रमशः ओठसम्म पुग्छन् भनेर थाहा पाइने उक्त निबन्धमा गौतम लेख्छन्, ‘क, ख घाँटीबाट निकन्छन्, त, थ दाँतबाट ट, ठ झन् अगाडिबाट र प, फ चाहिँ ओठबाट निस्कन्छ। त्यसकारण नेपाली अक्षरको क्रम स्वभावविक छ।’
शिव गाैतम र उनकाे 'झ्याम्ली बाख्राको पाठो'काे कभर
मानिसले निकाल्ने प्रायः सबै उच्चारणहरुलाई अक्षरमा रुपान्तरण गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु निकै ठूलो कुरा भएको कुरा उक्त निबन्ध पढ्दा लाग्छ।
संग्रहका निबन्ध मध्येमा सबैभन्दा अप्ठ्रो नकारात्मकताको सकारात्मक कुरा नेतिनेतिदेखि क्यान्सरको ओखती हो। प्राध्यापक गौतम आफैँ जैविक तथ्यांकसास्त्रका प्राध्यापक हुन्। निबन्धमा कसरी अनुसन्धानकर्ताहरुले नकारयुक्त अड्कल अर्थात नल हाइपोथिसस (null hypothesis) प्रस्तुत गरेर कसरी सकारात्मक नतिजा निकाल्छन् भन्ने व्याख्या छ तर सामान्य पाठकका लागि बुझ्न त्यो कठिन निबन्ध हो। तर त्यस्तै प्रकारको अर्को निवन्ध जन्मजात पुरुषको हातमा भने बच्चा जन्मनुको वैज्ञानिक तथ्य आनुवाशिंक विज्ञानको सहायताले सरल ढंगले केलाइएको छ। ‘आठ दुना सत्र’ त्यस्तै उच्च कोटीको वैज्ञानिक निबन्ध हो। शून्यदेखि ९ भएको अंक प्रणालीमा त्यो सम्भव नभए पनि ९ को गुण अर्थात अन्तिम नम्बरलाई ८ मा सार्ने हो भने त्यो संभव हुन्छ भन्ने तर्क लेखकले गरेका छन्। अर्थात ० देखि ८ सम्मको अंक प्रणालीको कल्पना गर्ने गरेर लेखकले आठ दुना सत्र हुन्छ भनेर देखाएका छन्। तीन आँखा, अरुण र बरुण तर्दा, आटसउटुस मध्यम कोटीका निबन्ध हुन्।
कतिपय आफूले सुनेका अन्धविश्वासयुक्त किम्वदन्तीहरु चलिरहुन् भनेर केही निबन्धमा लेखकले लेखे पनि चलन चल्तिमा कसैलाई नम्र हुन भनिने फलेको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र? सँग लेखक असहमत छन्। उनी लेख्छन्, फलेको वृक्ष झुक्नुमा गुरुत्वाकर्षणको हात छ। यो कसैको विनम्रतासँग कसरी जोडिन्छ? त्यसलाई कविताकै रुपमा रहन दिउँ भन्ने तर्क उद्वरण र उदाहरणको जादूमयी शक्तिमा पढ्न सकिन्छ। त्यसकारण लेखक कुनै निबन्धमा यथास्थितीवादी त कुनैमा त्यसको विरोधमा उभिएका छन्।
यस्ता अपवादका कुराहरु निबन्धको शब्दमा मात्रै होइन शिव गौतमको जीवन हेर्दा पनि लाग्छ। नेपालमा बच्चाहरुलाई देखेर भनिन्छ, हुने विरुवाको चिल्लो पात। तर कुनै बेला विश्वप्रसिद्घ हार्वड विश्वविद्यालयको प्राध्यापक रहेका शिव गौतम बालक हुँदा चलनचल्तीमा भनिने चिल्लो पातका थिएनन्। उनी अक्षरहरुलाई मन नपराउने, किताबलाई हुत्याउने, अत्यन्त चकचके, उट्फट्याङ र जिद्दी स्वभावका थिए। यद्यपि अहिलेको वैज्ञानिक खोजहरुले बच्चाको त्यस्तै जिज्ञासु स्वभाव नै ठूलो आविस्कारको जननी भएको देखाएका छन्। त्यसैले शब्दमा जस्तै जीवनमा पनि कतिपय मान्यताहरु (नेपालका) का अपवाद बनेका छन् लेखक।
भूमिकामा प्राध्यापक गोविन्द भट्टरार्इले भनेजस्तै ‘झ्याम्ली बाख्राको पाठो’ बौद्घिक, तार्किक, गहिरो र उच्चकोटीको निबन्ध संग्रह हो। तर पनि निबन्धमा भाषागत, व्यकरणात्मक त्रुटीहरु थुप्रै छन्। जस्तै कतै असुर लेखिएको छ त कतै अशुर। अनौपचारिक भाषा जस्तै हुन्छन् अरे, बेदमा लेखिएको छ अरे, को प्रयोग धेरै पटक भएको छ। भिन्न समय र परिवेशमा लेखिएकोले होला प्रत्येक निबन्धको शैली पनि फरक फरक छ। छपाइ र कभर आर्कषक छैन्। सम्पादन भएर निकालिएको भए सायद त्यस्ता सामान्य त्रुटिहरु हटेर निबन्ध संग्रह अझ उत्कृष्ट बन्न सक्थ्यो।
प्रकाशित ९ कार्तिक २०७५, शुक्रबार | 2018-10-26 13:40:06